Posted by Tranquillus | Jan 6, 2018 | Horumarka shakhsiyeed
Kaga baxa dhalashadagativité
Ma dooneysaa in aad joojiso xasaasiyad kaa haysata adiga oo aanad aqoon sida loo sameeyo?
Dareenka xun wuxuu saamayn nafta iyo kuwa nagu wareegsan.
Dareemidu waxay awood u leedahay inay u noqoto maalin fudud oo cabsi leh, waxay noqon kartaa xeelad, walaac ama xitaa ka sii dar ...
Adiga oo u ogolaanaya in aad ka adkaato dareenkaas, waxaad xanaaq u direysaa adiga oo ka cabsada fursado aad ku faraxsan tahay noloshaada, labadaba xirfad iyo shaqsiba.
Xitaa shakhsiyaadka dabeecad wanaagsan, qofna ma aha mid difaacaya tamarta taban.
Ballanta dhakhtarka ilkaha? Wareysi shaqo ayaa la qorsheeyey galabtaan? Imtixaan lagu gudbo? Fekerkayagu wuxuu saadaaliyaa xaalada ugu xun, xaaladaasina waxay noqon kartaa mid deg deg ah oo walwal ah.
Inaad awood u leedahay in aad ka baxsato maqnaanshaha waa kheyraad weyn oo lagu horumarinayo kartida qofka iyo kalsoonida.
Xalka ayaan ka dhici doono samada ama dunida dibadda, waa ku jirtaa.
Ha sugin wax intaas ka badan, ka hel fiidiyowgaan 4 min, xalka iyo talooyinka xaddidaya saameynta niyadjabinta nolol maalmeedkaaga ..., iyo wax kasta, ee 5 oo kaliya kaliya tilmaamaya:
1) Mahadsanid : kheyraadka muhiimka ah ee awooddaada shaqsiyadeed iyo xirfad leh!
2) Hirarka xun : Ogow oo iska ilaali mowjadaha taban!
3) Soo jiidashada : Fikradaha xun xun soo jiidashada, diidmada.
4) Isdhaafsiga : waxaa si fiican loo yaqaanaa, inuu ku kalsoonaado hadal ahaan sida qoraal ahaan u oggolaanaya inuu horay u socdo oo uu bogga u noqdo. Ka feker inaad ku faaruqiso dhammaan shidaalkan xun ee kaa qarxa.
READ Go'aan sameynta-Sida loo sameeyo Xulashada Xulashada?
5) Muuqaal ahaan : Bal qiyaas xaaladaha wanaagsan. Meel, muuqaal, xaalad ... naftaada iska daa oo maskaxdaada iska ilaali.
Faa'idadaadu waa mudnaan iyo kheyraad aad u weyn oo lagu hormarinayo xiriirka iyo qadarintaada.
Ka fogaansho la'aanta-Hirgelinta Mawjadaha xunxun May 11th, 2020Tranquillus
horeTalo-siinta Qaybta Koowaad-Macluumaadka Mine Gold
socdaTuto.com: Koorsooyinka Waxbarashada Bulshada Si Loo Tababaro Xirfadaha Shaqada.